Wasiiradda Arrimaha Dibada Itoobiya iyo Kenya oo gaaray magaalada Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 7 May 2015 7 May 2015
May 7 (Mareeg.com) Wasiiradda Arrimaha Dibada Itoobiya iyo Kenya Tedros Adhanom iyo Amina Mohamed ayaa goor dhow gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda Hoose.
Sida ay sheegayaan wararka Wasiiradan Arrimaha Dibada Kenya iyo Itoobiya ayaa ka qeyb geli doona xaflad loo sameynayo Baarlamaanka Jubba, kaasoo dhowaan la soo dhameystiray, isla markaana soo doortay Guddoomiye iyo labo kuxigeen.
Wararka ayaa sheegaya in wafuudyo ka socda wakiilada beesha Caalamka ayaa iyana ku wajahan Kismaayo, si ay uga qeyb galaan caleema saarka Baarlamaanka Jubbaland.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud uu isna ku wajahan yahay Kismaayo, si uu uga qeyb galo munaasabada loo sameynayo Baarlamaanka Jubba.
Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana ay noqoneysaa markii u horeysay oo Wasiiro arrimo dibadeed ka socda Itoobiya iyo Kenya ay tagaan magaaladaas.